Iindaba -Izibonelelo zePayipi
Imibhobho ye-PVC ithatha imibhobho ye-PVC-U yokuhambisa amanzi, enziwe nge-polyvinyl chloride resin njengeyona nto iphambili ekrwada. Ziyongezwa ngezongezo eziyimfuneko kwaye zenziwe ngokuqhubekeka kwe-extrusion. Yipayipi yokudonsa yokwakha enamandla aphezulu, uzinzo olulungileyo, ubomi obude benkonzo kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu. Ingasetyenziselwa ukwakha umsele, inkqubo yombhobho welindle kunye nenkqubo yombhobho wokungenisa umoya.
Izinto eziluncedo kumbhobho wePVC zezi zilandelayo:
1. Inamandla okuqina kunye nokucinezela kunye nokhuseleko oluphezulu.
Udonga lombhobho wePVC luthambile kwaye ukuxhathisa kulwelo kuncinci kakhulu. Umlinganiso woburhabaxa bayo kuphela yi-0.009. Umthamo wokuhambisa amanzi unganyuswa nge-20% xa kuthelekiswa nobubanzi obufanayo be-iron cast kunye ne-40% ephezulu kunombhobho wekhonkrithi.
3. Ukuxhathisa umhlwa kunye nokumelana neekhemikhali:
Imibhobho ye-PVC inokumelana okuhle kwe-asidi, ukumelana nealkali, ukumelana nokubola. Abachaphazeleki kukufuma kunye nomhlaba PH. Akukho nyango lubangela ukubekwa kwemibhobho. Umbhobho unokumelana ngokugqibeleleyo nomhlwa kwii-acid ezingaphiliyo, ialkali kunye neetyiwa. Kufanelekile ukuba ukukhutshwa kwamanzi amdaka kunye nokuhamba.
4.Ukuqiniswa kwamanzi okufanelekileyo: Ukufakwa kweepayipi zePV kunamanzi amnandi ngaphandle kokudityaniswa okanye ukudityaniswa kweringi yerabha.
5. Ukulwa nokuluma: Umbhobho wePVC ayingomthombo wesondlo, ngoko ke awuyi kukhukuliswa ziimpuku. Ngokuvavanyo olwenziwe yiNational Health Foundation eMichigan, iigundane azikwazi nokuluma imibhobho ye-PVC.
6. ukumelana Good ukwaluphala: ubomi inkonzo yesiqhelo ukufikelela ngaphezu kwama-50.
Isizathu sokufaka imibhobho ye-PVC ayisiyiyo nje le misebenzi ingasentla yokusebenza. Ubunzima bayo obulula bunokugcina iindleko zothutho loomatshini abanzima kwaye zinciphise kakhulu ixesha lokugrumba imingxunya kwimibhobho. Nokuba kukwinyikima okanye kwezinye iimeko, imibhobho yePVC inokubakho ngokuchanekileyo. Oku kwenza umbhobho wePVC ngakumbi nangakumbi ngabaxhasi.